Soomaaliya, 18 January 2019
Khamiis 18 January 2019
Dagaal dhex-maray ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xooggan dhex maray ciidamo Ethiopian ah iyo maleeshiyada Ururka al-Shabaab.
Faaqidaadda: Weerarkii magaalada Nairobi
Warbixin sannadeedka muhaajiriinta Itoobiya
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay weli soo qulqulayaan muhaajiriinta ka imanaya dhinaca Itoobiya ee doonaya inay gaadhaan dalka Yemen. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo xaaladda Yemen aysan weli waxba iska beddeli amni ahaan.
Al-Shabaab oo caruur ku qafaalatay Bakool
Kooxda Al-Shabab ayaa carruur yar oo u badan arday ka kaxeystay degmada Ceel-Garas ee gobolka Bokool.
Qatar oo gaadiid dagaal ku wareejisay dowladda Somalia
Dowladda Qatar ayaa maanta militariga Soomaaliya ku wareejisay 68 gadiidka gaashaaman ee dagaalka ah.
Dadka fikirkooda loogu xiro Somaliland oo soo kordhaya
Dhawaanahan waxa Somaliland lagu xidhay dhawr qof oo kala duwan, kuwaas oo qaarkood eedaynta loo haysto ay ka mid tahay aragti ay ka dhiibteen xaaladaha taagan wakhtigan ee Somaliland.
Bandhigga VOA: Musuq-maasuqa ka jira warbaahinta Soomaaliya
Al-Shabaab: Werarkii Nairobi wuxuu jawaab u ahaa go'aankii Trump
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi uu jawaab u ahaa hadalkii go’aankii madaxweyne Donald Trump uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel.
Warbixin: Doodda Sharciga Bangiga Dhexe
Taniyo markii xubnaha Baarlmaanka Soomaaliya ay u codeeyeen Sharciga u ogolaanaya in qof ajnabi ah uu qaban karo xilka gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee dalka, waxaa soo baxayey kala aragti duwanaasho u saabsan arrinkaas.
Soomaaliya oo cambaareysay weerarka Nairobi
Askar lagu dhaawacay qarax ka dhacay gobolka Bari
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 454-aad